"ကိုယ့်အသည်းလေးကို ဂရုစိုက်ပါ" (သို့မဟုတ်) မပေါ့လျော့သင့်သော မထိတ်သာ မလန့်သာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ - Samitivej Hospital Bangkok Thailand - JCI Accredited World Class Hospital
“ ကိုယ့်အသည်းလေးကို ဂရုစိုက်ပါ” (သို့မဟုတ်) မပေါ့လျော့သင့်သော မထိတ်သာ မလန့်သာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ
မတ် 4, 2019 Pitulak Aswakul, M.D.
အသည်းအဆီဖုံးတယ်ဆိုတာ အသည်းဆဲလ်တွေပေါ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း အဆီတွေ စုပုံကျရောက်လာတာကိုခေါ်တာပါပဲ။ အဲဒါတွေကြောင့် အသည်းမှာ ရောင်ရမ်းလာရတာပါ။
အသည်းအဆီဖုံးတာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းသိမ်းဖို့ နေထိုင်မှုပုံစံ (life style) ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက် ထိန်းညှိခြင်း) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ အရာရာဟာ အပြောင်းအလဲမြန်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရပေလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေလဲ အပါအဝင်ပါပဲ။ နေမကောင်းဖြစ်မှုနဲ့ ရောဂါဘယတွေရဲ့ အလားအလာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို ချက်ချင်းလက်ငင်း အသွင်ပြောင်းပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကနေ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာပါပဲ။ ဥပမာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဟာဆိုရင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ကလေးတွေအပါအဝင် တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလျက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် – အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ သူက ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လို အန္တရာယ်မျိုးတွေကို ပေးနေတာလဲ။ ?
အဆီ ဆိုတာ တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် သဘာဝက ပေးထားတဲ့ စွမ်းအင် အရင်းအမြစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အစာမစားဘဲနေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သိုလှောင်ထားတဲ့အဆီတွေကို လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်အလို့ငှာ ထုတ်သုံးရပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ အဓိက အဆီသိုလှောင်ရာနေရာကြီးနှစ်ခုကတော့ ဝမ်းဗိုက် နဲ့ အသည်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းမှာ ပမာဏ ပိုမို သိုလှောင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အသည်းမှာ အဆီပမာဏ မြောက်မြားစွာ စုပုံနေပြီဆိုရင်တော့ အသည်းအဆီဖုံးတော့တာပါပဲ။ အကျိုးဆက်ကတော့ ခန္ဓာကိုယ် အနှံ့အပြားမှ ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ဖို့ အလားအလာရှိလာတာပါပဲ။
အသည်းအဆီဖုံးတယ်ဆိုတာ အသည်းဆဲလ်တွေပေါ်ကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုအတွင်း အဆီတွေ စုပုံကျရောက်လာတာကိုခေါ်တာပါ။ အဲဒါတွေကြောင့် အသည်းမှာ ရောင်ရမ်းလာရတာပါ။ အကျိုးဆက်ကတော့ ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ အမျိုးမျိုးဖြစ်လာပြီး တခြား ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို ထိခိုက်စေပါတော့တယ်။ အထူးသဖြင့် ဆီးချို၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကြောင့်အသည်းရောင်ခြင်း၊ အဝလွန်ခြင်း၊ သွေးတွင်းအဆီများခြင်း၊ သွေးတိုးခြင်း၊ သွေကြောဆိုင်ရာရောဂါများ စတဲ့ နာတာရှည်ရောဂါတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အသည်းကို အဆီဖုံးရာကနေ အသည်းဆဲလ်များ ပျက်စီးခြင်း နဲ့ အမြှေးပါးများ ထူလာခြင်းတို့ကြောင့် အသည်းခြောက်ရာကတစ်ဆင့် အသည်းကင်ဆာ အဆင့်အထိ ပါ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဖြစ်ရခြင်း အဓိက အကြောင်းရင်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
လူနာရဲ့ အရက်သောက်တဲ့ ပမာဏနှင့် ကာလ၊ နောက်ကြောင်းရာဇဝင်ကို စစ်ဆေးပြီး ရောဂါ အတိမ်အနက် နဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒီအုပ်စုမှာတော့ လူနာသည် အင်ဆူလင် (Insulin) ကို ယဉ်ပါးသွားပြီး အသည်းသို့ အဆီများ စုပုံလာရာမှ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ သိုလှောင်ထားတဲ့ စွမ်းအင်တွေအပေါ်မှာ မှီခိုလွန်းတာကနေ အစပြုတာပါပဲ။ အကြောင်းရင်းကတော့ ကျန်းမာရေးဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်တဲ့ အလွန်၀ခြင်း၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ သွေးတွင်းအဆီများခြင်း၊ အသည်းရောင်အသားဝါစီပိုး စတာတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ရတာတစ်ခုကတော့ လူနာဟာ ကိုယ့်အသည်း ကိုယ် ဘာဖြစ်လို့ ဖြစ်နေမှန်းမသိတာပါပဲ။ မိမိရဲ့ အသည်း ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်တဲ့သူဖြစ်နေတတ်ပြီး ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှ အသည်းရဲ့အခြေအနေကို သိလိုက်ရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းကို ကြောက်စရာရောဂါတစ်ခု ဖြစ်လာစေတဲ့ အချက်ကတော့ ကနဦးမှာ ဘာလက္ခဏာမှ မပြတာပါပဲ။ ရောဂါကို ခြေရာခံဖို့ ခက်ခဲပြီး ဥပမာ အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း၊ အနည်းငယ် ပျို့ခြင်းနဲ့ ဝမ်းဗိုက်ညာဘက်အောက်နံရိုးနား အသည်းတည်ရှိတဲ့နေရာမှာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြစ်နေ တတ်ခြင်း စသည်တို့လောက်သာ ဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။
အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဟာ ရောဂါတစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်လာဖို့ အချိန်ယူတတ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိအဆင့် သို့ ရောက်လာဖို့ဆိုရင် တစ်နှစ်ကနေ နှစ်နှစ်အထိ ကြာတတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် နှစ်စဉ် သွေး စစ်ဆေးခြင်း၊ အခြားကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့် ဆရာဝန်နဲ့ စမ်းသပ်ခြင်းစတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှတစ်ဆင့်သာ သိရှိရတတ်ပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို အသည်းခြောက်နေမှ သိရတာတွေတောင် ရှိပါတယ်။
အသည်းအဆီဖုံးတာကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ ကိုယ်အလေးချိန် ထိန်းသိမ်းဖို့ နေထိုင်မှုပုံစံ (life style) ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း (ဥပမာ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက် ထိန်းညှိခြင်း) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ထိန်းညှိတယ် ဆိုရာမှာ ကျန်းမာရေး အတွက် သင့်လျော်တဲ့ အစားအစာများကို ရွေးချယ်စားသုံးတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အဆီစားခြင်းကို လျှော့ချပြီး အမျှင်ဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာများကို ပိုမိုစားသုံးခြင်း စတာတွေကို အလေးထား လုပ်သင့်ပါတယ်။ အရက်ကို ဖြတ်လိုက်ခြင်း (ဒါမှမဟုတ်) လျှော့သောက်ခြင်းနဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေ၊ ဓာတ်စာတွေကို မစားမသောက်ခြင်း စတာတွေနဲ့ အသည်းအပေါ်မှာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်မှု တွေကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ အသည်းအဆီဖုံးခြင်းဆိုတာ ကင်ဆာလို ကြောက်မက်ဖွယ်ရောဂါဆိုးကြီးတစ်ခု မဟုတ်ပေမယ့် အသည်းဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာထဲက အဆိပ်အတောက်တွေကို စစ်ထုတ်ပေးခြင်းနဲ့ အခြားအဓိက လုပ်ငန်းဆောင်တာ တွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ အသည်းကို ဂရုမစိုက်ဘဲ ပစ်ထားလိုက်ရင် အခြား ကျန်းမာရေး ဖောက်ပြန်မှုတွေက သင့်ကို တံခါးလာခေါက်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် “ ကိုယ့်အသည်းလေးကို သေသေချာချာ ဂရုစိုက်ပါ” လို့ပဲ မှာကြားလိုက်ချင်ပါတယ်။
"ကိုယ့်အသည်းလေးကို ဂရုစိုက်ပါ" (သို့မဟုတ်) မပေါ့လျော့သင့်သော မထိတ်သာ မလန့်သာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါ ဒီကနေ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ အရာရာဟာ အပြောင်းအလဲမြန်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားရပေလိမ့်မယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်တွေလဲ အပါအဝင်ပါပဲ။ နေမကောင်းဖြစ်မှုနဲ့ ရောဂါဘယတွေရဲ့ အလားအလာဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀တွေကို ချက်ချင်းလက်ငင်း အသွင်ပြောင်းပစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကနေ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ဖောက်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာပါပဲ။ ဥပမာ အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဟာဆိုရင် ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ ကလေးတွေအပါအဝင် တစ်နေ့တစ်ခြား တိုးပွားလျက်ရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် - အသည်းအဆီဖုံးရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။ သူက ကျွန်တော်တို့ကို ဘယ်လို အန္တရာယ်မျိုးတွေကို ပေးနေတာလဲ။ ?
User rating: 2.62 out of5with 34 ratings